The Perfect Cheap Road Off Electric Self Dheelitirka mooto - Jomo Technology Co., Ltd
Kala duwan oo uu ka mid yahay tixgelinta muhiim ah halka xulashada baabuur koronto ku shaqeeya. Is miisaamid mootobaabuurta dheereeya yar yahay, oo dhan iyo baayacmushtarkaaga u dhigma isku mid. Developed by Koowheel, K7 Hoverboard la xiranayo ah "laba-wheel, baabuurta gaarka loo leeyahay is-dheelli.". Aan loo eegin in aad ku dhameystay, tartanka, ama gaadiidka, Hoverboard K7 had iyo jeer waa in xasiloonida. The Hoverboard K7 Is-Dheelitirka mooto 8.5inch hoverboard giraangiraha weyn wadada, si aad sidoo kale waxa ay la ciyaari karaan iyo sidoo on kor iyo hoos wadada. Kale Model K5 LABAAD giraangir mooto dheelli SELF la dual Bluetooth iyo nalalka smart keentay. The ka mid ah farqiga u ah in aad ka heli doontaa oo u dhexeeya Segway iyo guddi isku miisaamida yar waa maqnaanshaha isteerinka, weliba, 50% miisaanka dhinac kasta si ay u dhawraan dheelitirka auto hor iyo ka dib jeedo off, iyo wax ka badan oo deggan, ka fudud oo ammaan ah in la raaco, gaar ahaan bilowga ah. Xuquuqda halkan at Koowheel, aad mid ka mid ah qiimaynta ugu fiican oo ku saabsan mootooyinka is-dheelli-ka heli doontaa.
Koowheel Hoverboard waa mid ka mid ah kuwa kaamilka ah "Made in China" mootooyinka isku miisaamo. Waxaa lagu qiyaasay in mooto this waa final aad ugu yaraan 10 sano, taas oo macnaheedu yahay in aad si xaqiiqo ah u heli doonaan ugu on your lacagta mar kasta oo aad doorato is this dheelli mootooyinka. New laba wheel isku dheelli mooto korontada . Mooto Tani waxay sidoo kale habka xasilinta koox aan caadi joogo in mootooyinka kala duwan. Marka laga soo tago in, sida muuqata mooto uu leeyahay madal taagan iyo laba giraangiraha in ay yihiin soo jiidashada ugu weyn ee qaar ka mid ah mootooyinka keentay. The 2 Wheel Dheelitirka mooto nalalka 's waa dhalaalaya, oo aad u yeelan doontaa in ay maamulaan on mishiinka si fudud iyo sidoo. Nolosha batari dheer nidaamka ku hadla Bluetooth Double ku noole keentaa isku darka ugu fiican waqti habeen waxa ay u muuqataa in ay fiican safarka midig, LED nalalka dhuxul dariiqyada, dhegaysiga music iyo waayo-aragnimo u dheelitirka kaamil ah. Ka sokow, waxaa jira gacanka ee bartamaha, si aad u fudud in la keeno.
Noocan ah mooto is-dheelli , ka duwan kuwa kale, waxay lahaayeen dareemayaal cuf 8pcs, ma aha gros 4pcs silicone joogto ah, ka badan oo xasaasi ah oo deggan, heerka hoose ee haleysan. Waxaan hore u soo codsatay patent iyo waxa non-jebinta la dhimatay, solowheel ama mandiil, teknoolajiyada gebi ahaanba kala duwan oo patent noo gaar ah. Haddii aad tahay gacan cagaaran, dooran heerka 'bilaabayso'. Taayirada The waa masuuliyada raagaya iyo culus, oo kuwanuna waxay qaban karto mari nooc kasta oo dhul. Taayirada sidoo kale caawin ku joogaana si aad u hesho fasaxa ugu fiican halka fuushan. Riding waa madadaalo-ilaa iyo inta hoose waa u fududahay.
waqti Post: Oct-05-2017